Meaning of zvakanaka nzvimbo uye neizvi nzvimbo vachishandisa "kururamisira", iro shamwari manzwiro?
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Meaning of zvakanaka nzvimbo uye neizvi nzvimbo vachishandisa "kururamisira", iro shamwari manzwiro?
Nzira 3500 Yen zvichireva
nyanzvi kufembera kuti "kururamisira" neizvi nzvimbo usununguke yokunyatsoongorora
ndiye mumwe wokwavo kadhi kuna Major Arcana "kururamisira" ndeimwe inoratidza fungwa mwero uye wakatsiga ehurumende hazvina machira. Vose vakanaka ndechokuti kururamisira, kuti nokuti ane divi kuti yeruramisiro vari kwose kwose, maererano norudo kuti ane ngoni imwe isomer, asi asingaiti kushanda kushanda zvikuru kadhi pane chinhu.
Kana kadhi iri vakabuda, pane kutsvaka kutama kana zvinhu zvizhinji chokwadi, zviri nani kubvuma sezvazvakaita njodzi, unogona kuti kutendeuka ezvinhu.
kana mamwe bato manzwiro
yakanaka chinzvimbo "kururamisira" zvinofanirwa kureva "kururamisira" ndizvo zvakanaka nzvimbo, zvinoratidza kuti mamiriro ezvinhu pari akatsiga zvikuru uye akanaka ari une. Zvibereko Saka kure matambudziko uye kuita pakupedzisira, kusangana migumisiro uye migumisiro nayo, Toka zvinokwanisika kuwana mubayiro, murudo ukama, dambudziko yapera rinomiririra pakuti pachiyero anogona kutorwa. Kana munhu une
anoda kuti manzwiro ake angadai rinotungamirirwa kwamuri chete munhu, kunyange kana rusina kukwana mberi rudo, anoratidza kuti hauna akaipa manzwiro pamusoro penyu. Nekuti pakati maviri vanhu inoratidza mamiriro hapana kukundikana chinokosha kana dambudziko, kuitira rokurwadzisa nechiyero, zvichava kukwanisa kuisa mugumo kuti vanobatana maoko pamwe unoenderana kuva nokutenda kwakanaka kune bato. Chikumbiro uye tarisiro, chinangwa mhiri
dhigirii, saka aigona kuparadza pakuenzanisa kururamisira ichi, ngationei uchikoshesa manzwiro mamwe bato.
pasina kunyanyisa netarisiro kune pati, kana zvichibvira kuti kugamuchira pachako, mamiriro ezvinhu uye zvakatipoteredza dzakapoteredza hwavo zvakanaka zvakanaka akaita chiratidzo. Kana ukasarudza chinhu kuteerera kwake mafungiro, kana kuti chiito kuriremekedza, mugumo kwatiri zvirokwazvo nyasha nemi. _x00 0D_
chokwadi kuti kadhi ndiye neizvi nzvimbo manzwiro
"kururamisira" kuti munhu iwe harungashandurwi nzvimbo iri nokuzvikudza kuti zvinoreva "kururamisira" kureva, kunoratidza kuti mamiriro ezvinhu akapoteredza vaviri vanhu haisati kugadzikana iwe. Uyewo ari Parizvino akafunga igadzikane, pachava mukana kuti buda zvinhu kuti kungoerekana chinhu kugadzikana. Ukama naye
kusarirwa kurarama zvakanaka, kana akava nemhaka pakarepo mwoyo, vaviri achionekana, dzakadai kwaita somukwikwidzi, kungava zviratidzo dambudziko kunoitika haana kudzikama.
Kana kadhi iri vakabuda, zvakakosha vadzosere mwero. Kana mune nyaya yakanga kunyanyisa tarisiro anokumhan'arira, kuti kunoda kosi kururamiswa, pane yaida chimwe chinhu anokumhan'arira, kufungisisa pachake, yake kunatsiridza chikamu anogona dzakachinjwa unogona kutendeuka manzwiro kwamuri.